Noma yimuphi umuntu unomkhuba wokwesaba, ukwesaba okuthile. Ikakhulukazi yengane, ngoba lizungezwe izwe elinjalo elingalindelekile nelikhulu. Ukuze angatholakali empilweni yakhe emdala, umsebenzi wabazali, uthisha nomqondo wengqondo ukusiza ingane ukuba ibhekane nenkinga yokwesaba ngokuhamba kwesikhathi (enye yezimzwelo eziyingozi kakhulu). Ukulwa nokwesaba kungahlala isikhathi eside kakhulu. Ukuze ubhekane nalokhu, kunezindlela ezihlukahlukene zokusebenza nokwesaba kwezingane.
Imisebenzi yokusebenza nokwesaba kwezingane
Okokuqala, kubalulekile ukusiza ingane ukuba inqobe ukwesaba kwakhe, imfundise izindlela zokuzilawula nokuzilibazisa, ususe izithombe ezimbi futhi uguqulele esigabeni sokungajabuli nokuzivikela, ufundise izingane ukuba zilandele kahle imizwa yazo, imizwelo nemizwelo yabanye, yenze ingane iqiniseke amabutho abo.
Ungasebenzisa ukwelashwa kwe-fairytale. Ngomsebenzi sithatha noma iyiphi inganekwane (ubuciko, i-didactic, therapeutic, meditative or correctional) ne-sandbox ekhethekile yengqondo. Iqhawe elikhulu lezindaba lingesaba (isibonelo, Prince Fear noma Sleep Sleep, njll), futhi ungenza ukwesaba hero yesibili noma umlingiswa othintekayo, njll. Ngakho-ke, imibono ebalulekile yokwelapha ifakwe ikhodi kumatheksthi. Uma usebenza ngezinhlobo ezahlukene zezinganekwane, akufanele uvimbele izambulo zakho zokudala. Indaba kumele iwakhiwe ukuze ukuthuthukiswa kwezehlakalo ongakhuluma ngayo nengane. Ngemuva kwalokho, ungamema ingane ukuthi idwebe izinhlamvu zezinganekwane. Bhala indaba yezinganekwane ephepheni, kuzokusiza uma kwenzeka ukuphindaphindiwe kokwesaba kwengane.
Kukloterapiya - enye indlela yokulwa nokwesaba kwezinsana. Esikhathini sokusebenza kwengqondo yobuciko, ukusebenza nedoli, ungahlukanisa ingane nokwesaba: isibonelo, hhayi ingane isaba, kodwa ibhere ozithandayo noma inja. Kulolu cala, i-kid iphenduka ibe nesibindi, umvikeli onamandla wesitokisi sakhe.
Ukudweba kungasiza ekunqobeni ukwesaba. Akunandaba, ngisho noma ingane yakho ingenalo ithalenta lobuciko. Uzocela ukuthi udwebe ukuthi yini ephazamisayo. Yebo, kufanele umbuze ngalokhu ngendlela eqondile, ifomula, vele ucele, hhayi ukuyala. Ngicabanga ukuthi cishe noma yimuphi umzali uzokwazi ukubhekana nomsebenzi onjalo.
Ngaphandle kokudweba, unganikeza ukufaniswa kwengane ye-plasticine. Izenzo zabazali kulokhu zifana nalabo abakwidwebayo.
Ngendlela ephumelelayo, indlela yokunqoba ukwesaba kwengane, kungaba nengxoxo evamile nengane ngesihloko esibakhathazayo. Kodwa ungaqali ukukhuluma nezingane ezincane kakhulu. Ngeke nje iphumelele futhi ngeke uthole ulwazi olufunayo. Ukuze ingxoxo ikhiqize, kuyadingeka ukuba ingane ithembe ngokugcwele umuntu omdala. Kuphela kule nkinga ungafaka ingane yakho engxoxweni eqotho futhi inqobe ukwesaba kwezingane. Le ngxoxo kufanele isondele kakhulu. Kunconywa ukuthi kusengaphambili ucabangele uhlu lwemibuzo esekelwe ukwesaba kwengane okwamanje. Ingxoxo kufanele ibe nobungane, ngakho-ke akuvumelekile ukuba ufunde imibuzo ephepheni, ngaphandle kwalokho ngeke kube yingxoxo. Qaphela ukuthi yonke imibuzo yakho ibuzwa kalula, ifinyeleleke futhi iyaqondakala ezingeni lentuthuko yengane yakho. Noma kunjalo, umuntu akakwazi ukugxila kwesinye sezizathu, ngoba kungabangela ukuba kuvele ukwesaba okusha.
Uma usebenza ukwesaba kwengane, izici zomdala zengane kufanele zicatshangelwe, ngoba i-syndrome ye-pathological fears ebuntwaneni ngezigaba ezahlukene zeminyaka ihluke ngokuphelele.
Kodwa-ke, izingane zinokwesaba okunjalo okuwukuphela kwengqondo kwengqondo ongayiqonda. Ezimweni ezinjalo, kungcono ukubonisana nochwepheshe.
Ngeshwa, ukwesaba kwezingane kuvela ezimweni eziningi, hhayi ngephutha lomuntu, kodwa abazali ngokwabo (ubumnene obungokomoya, izinkinga zomndeni noma okunye, ukukhathazeka ngokweqile, ukunakwa ngokweqile). Ngakho-ke, kuwumsebenzi wawo wonke umzali ukuxwayisa nokuvikela izingane ngokwesaba ngokushesha. Futhi ngenxa yalokhu kuyadingeka ukwazi ukuthi ingane isaba kakhulu futhi ngani. Phela, ukuxhumana ngokomzwelo okuhle kungenxa yesimo sengqondo yengqondo yengqondo yengane yakho.
Indlela yokubona ingane esebenzisa izidakamizwa
Amathoyizi okuthuthukiswa kwengane
Ukufundisa izingane zasenkulisa ukuzihlonipha nokuzethemba
Kungani ingane isaba ubumnyama
UJulia Kovalchuk okhulelwe wahlanganyela iresiphi yesaladi elula yokudla evela ku-movie nakutamatisi
U-Alla Pugacheva noMaxim Galkin babonisa izingane zabo ezikhulile. Izithombe
Uyini umehluko phakathi kweminyaka neminyaka phakathi kwendoda nowesifazane?
Amahlaya ngo-Ephreli 1 ngabangane, engifunda nabo, umama nobaba
Ungasusa kanjani ukulimaza usuku olungu-1
Ingaphakathi yendawo yokusebenza
Izithasiselo zokudla eziyinkimbinkimbi
Inkukhu umhluzi ngamadombolo